Node.js 15.0 biara na mmelite na NPM, V8 na ndi ozo | Site na Linux
Emeelarị ụdị nke Node.js 15.0 ọhụrụ ọ na-abụkarị maka onye ọ bụla. Nọmba. 15 ga-eji dochie Node.js 14 dị ka ụdị "ugbu a", mgbe Node.js 14 ga-akwalite LTS na ngwụcha ọnwa a. Node.js 14 ga-anata ọnọdụ LTS ma kwadoo ya ruo Eprel 2023. Madebe ngalaba LTS gara aga nke Node.js 12.0 ga - adịgide rue Eprel 2022 na otu tupu ngalaba ikpeazụ LTS 10.0 ruo Eprel 2021.
Ebe ọ bụ na nke a bụ ụdị mbipute adịghị mma, Node.js 15 agaghị akwalite LTS. Ekwesịrị iburu nke a n'uche, n'ihi na ọrụ a n'okpuru nkwado nke OpenJS Foundation na-atụkarị aro ka ejiri usoro ntinye LTS maka mmepụta ihe.
Cheta na enwere ike iji ikpo okwu Node.js ma maka mmezi ihe nkesa weebụ yana maka ịmepụta ndị ahịa na mmemme netwọk nkesa.
Iji gbasaa ọrụ nke ngwa maka Node.js, a kwadebere nnukwu nchịkọta nke modulu, nke ị nwere ike ịchọta modulu na ntinye nke HTTP, SMTP, XMPP, DNS, FTP, IMAP, sava POP3 na ndị ahịa, modulu maka ijikọ ọnụ na usoro ntanetị dị iche iche, WebSocket na ndị na-elekọta Ajax, njikọta DBMS (MySQL, PostgreSQL, SQLite, MongoDB), template template, CSS engines, mmejuputa iwu-algorithm na usoro ikike (OAuth), XML parsers.
1 Main atụmatụ ọhụrụ nke Node.js 15.0
2 Etu esi etinye Node.JS na Linux?
Main atụmatụ ọhụrụ nke Node.js 15.0
Na ụdị ọhụrụ a gbakwunyere nnwale nnwale nke klaasị AbortController, nke dabere na AbortController web API ma na-enye gị ohere ịkagbu mgbaama na ahọrọ API dabere na nkwa.
La N-API (API iji mepụta ngwa mgbakwunye) emelitere na nsụgharị 7, nke gunyere usoro ohuru iji aru oru na ArrayBuffers.
Moto V8 emelitere na nsụgharị 8.6, Kedu na-enye ohere Node.js 15 iji mejuputa ọrụ dịka Promise.any(), AggregateError, String.prototype.replaceAll (), na ndị ọrụ ọrụ Boolean "&& =", "|| =", na "?? =".
Ntughari na NPM 7.0 ngwugwu ngwugwu ohuru, ebe enwere nkwado maka Wọkspeesi iji jikọta nkwado nke ọtụtụ nchịkọta n'ime otu ngwugwu, akpaka nrụnye nke ndị ịdabere na ndị ọgbọ, ụdị nke abụọ nke usoro mkpọchi (ngwugwu-lock.json v2), na yarn.lock mkpọchi faịlụ nkwado.
A gbanwere onye na - ajụghị ihe na - eme ihe iji jiri ndabara "tụfuo" kama ịdọ aka na ntị "dọọ aka na ntị".
Na "tufuo" mode, na enweghị onye njikwa akọwapụtara nke ọma, enweghị njikwa tufuo ihe a na-edeghị aha, ma ọ bụrụ na edozi njikwa, omume ahụ agaghị agbanwe. A na-enye ọkọlọtọ "–unhandled-rejections = ịdọ aka na ntị" iji gbanwee omume gara aga.
Agbakwunyere nkwado nnwale maka QUIC protocol na modul ahụ "Net", nke bụ ihe ndabere maka HTTP / 3 ma ewere ya dị ka ihe ọzọ maka TCP + TLS maka Web, nke na-edozi nsogbu na ogologo ntọala na oge mkparịta ụka nke njikọ TCP ma wepu oge igbu oge nke ngwugwu n'oge nnyefe data. Iji mee ka nkwado QUIC dị na Node.js, achọrọ mgbakọ.
QUIC bụ nkwụnye n'elu UDP nke na-akwado otutu multipleinging nke ọtụtụ njikọta ma na-enye ụzọ ezoro ezo dịka TLS / SSL.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Node.js 15.0 biara na mmelite na NPM, V8 na ndi ozo